Japan Translator | PFE Company Limited ﻿
•	Project ခှဲ ၀ေ ပေး ခွငျး
•	Auto Cad File,PDF File ,JW Cad File များ ဖွင့် ပြီး Data များစစ် ဆေး ပေး ခြင်း ( အိမ် အလုံး ရေ/ဖွင့် ရ မ ရ /သုံး လို့ ရ မ ရ စစ် ဆေး ပေး ခြင်း )
•	Japan Office ရှိ Operator များနှင့် ပါတ် သတ် ပြီး Schedule ညှိ ပေး ခြင်း
•	CAD data နှင့် ပါတ် သတ် ပြီး Japanese Instruction များ အား 3D Modelar များ အား ရှင်း ပြ ပေး ခြင်း
•	Client မှ ပို့ပေး လာသော Project Check Back File မြား အား project အလိုကျ ခှဲ ၀ေ ဘာသာ ပွနျ ပွေး ရ ခွငျး
•	Modelar များမှ ဖြေ ရှင်း ချက် များ အား Operator ဘက် သို့ ပြန် လည် ဖြေ ရှင်း ဆွေးနွေး ရ ခြင်း
•	Project Coordinator နှင့် 3D Max Modelar များကြားSchedule Control and Management လုပ် ပေး ခြင်း
•	Japanese Instruction များ အား ဘာ သာ ပြန် ပြီး Building Model Texture , Gardent Texture များ ရှာ ပေး ရ ခြင်း
•	Japan Head Office မှ ပို့ ပေး သော Invoice ကို Myanmar Formatသို့ ပြောင်း လဲတွက် ချက် ပေး ရ ခြင်း
•	Myanmar ရုံး ခွဲ ရုံး ပိုင်း ဆိုင် ရာ ကိ စွ များ အား Japan ရုံး ချုပ် နဲ့ ညှိ နိုင်း ပေး ရ ခြင်း ( Calendar Schedule/Organization Chart )
•	Must have qualification of JLPT N2 Level .
•	Influence in Japanese4Skills
•	Be able to use computer and advance skills and advance skills in Microsoft word,Excel,Power point and e-mail by Japanese and English .
•	Fluent in Basic English writing ,reading and speaking
•	Good personality and good communication with other person
Japan Translator Translator/Interpreter Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon PFE Company Limited Translator/Interpreter Jobs Translator/Interpreter Jobs Construction / Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon